थ्रेसहोल्ड ठीक छ, हामी सानो हुनलाई जन्मेका हैनौं - Tourisms Online News
थ्रेसहोल्ड ठीक छ, हामी सानो हुनलाई जन्मेका हैनौं
'मधेसी मोर्चावीच पार्टी एकता हुनुपर्छ, कार्यनीति पनि फेर्नुपर्छ'
२०७३, १४ चैत्र सोमबार ०४:०५
काठमाडौं । सरकारले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको कानूनी व्यवस्था गर्नासाथ साना पार्टीहरु रिसाएर पत्रकार सम्मेलन गर्नतिर लागे । तर, संसदमा एक सीटको प्रतिनिधित्व गरिरहेको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक भने थ्रेसहोल्डको पक्षमा उभियो ।
व्यवस्थापिका संसदमा एक सीटको प्रतिनिधित्व गरिरहेका फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव थ्रेस होल्डको पक्षमा उभिएका छन् । थ्रेसहोल्ड लागेकोमा उनी खुशी देखिएका छन् । एकसीटे दलका नेतासमेत थ्रेसहोल्ड लाग्दा किन खुशी ? अनलाइनखबरले यादवसँग छोटो कुराकानी गरेको छः
थ्रेसहोल्ड लागिसकेपछि अब तपाईको जस्तो एकसीटे दलको राजनीति त सिद्धिने भो त हैन ? अहिले संसदमा तपाईको तर्फबाट सरिता यादवजी सांसद हुनुहुन्छ, अबदेखि यस्तो मौका नपाइने भयो हैन त ?
सबैभन्दा पहिले त यो थ्रेसहोल्डले कुनै व्यक्ति वा कुनै दललाई भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ वा राष्ट्रलाई हित गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी र मैले अहिलेको अवस्थामा थ्रेसहोल्डलाई स्वागत गरेका छौं ।
यो थ्रेसहोल्डले के गर्छ भने नेपालको जुन राजनीतिक तरलता छ, त्यसलाई स्थायित्वतिर लान्छ । अर्को, पार्टीं निर्माण प्रक्रियालाई पनि यसले सहयोग गर्छ ।
कसरी सहयोग गर्छ थ्रेसहोल्डले ?
यसले व्यक्तिका निजीगत स्वार्थहरु सामुहिक स्वार्थमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउँछ । त्यसैले समग्रतामा राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थिर बनाउन, राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न र, पार्टीलाई पार्टीका रुपमा विकास गर्न यो थ्रेसहोल्डलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौं ।
तर, साना दलहरु त थ्रेस होल्डबाट आत्तिएका छन् नि ? संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै गरिसके…
यसमा आत्तिनुपर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ ।
तपाईको जस्तो सानो पार्टीलाई त यसले घाटा लगाउने भयो नि हैन र ? संसदमा पाइलै टेक्न नपाइने भयो…..
हाम्रो पार्टी अहिले सानो छ । तर, हामी सधैं सानो बन्नका लागि जन्मिएको हैन नि । भोलि यो देशकै नेतृत्व लिन्छु भनेर अगाडि बढेको हो । त्यसैले हामीले सानो पार्टीलाई ठूलो बनाउने अभियानमा जानुपर्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, थ्रेस होल्ड राम्रो हो, यसबाट हामी खुशी छौं ।
साना पार्टीहरुले गरिरहेको थ्रेसहोल्डको विरोधलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
विरोध गर्ने उहाँहरुको आफ्नै तर्क र कारण होला । यसको जवाफ वहाँहरुले नै दिनुहुन्छ होला ।
उसोभए तपाई चाहिँ थे्रसहोल्डको विरोधमा लाग्नुहुन्न हैन त ?
नेपालजस्तो एउटा सानो मुलुक र विविधताले भरिएको मुलुकको जुन प्रकारको भूराजनीतिक अवस्था छ, यसमा मैले के देख्छु भने यो थ्रेसहोल्ड तीनवटा कोणबाट राम्रो छ । एउटा त राजनीतिलाई स्थिर बनाउँछ, अर्को कुरा पार्टीलाई पार्टीका रुपमा विकास गर्न बाध्य पार्ट ।
तेस्रो कुरा निर्वाचनमा भाग लिइसकेपछि थोरै पार्टी भयो भने निर्वाचन खर्च देखि लिएर पार्टी व्यवस्थापनसम्म यदि सरकारकै तर्फबाट गर्नका लागि सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ, निर्वाचन आयोगलाई पनि सजिलो हुन्छ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने दलगत स्वार्थ वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर हामीले मुलुकको हितमा सोच्ने हो भने थ्रेसहोल्डलाई बिरोध गर्नुपर्ने म कारण देख्दिनँ ।
यो थ्रेसहोल्डले पार्टी फुटलाई पनि त रोक्ला नि ?
निश्चित रुपमा । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले पार्टी फुटाउने कुरा राकिन्छ । अझ यस्तो फुटबाट बचाउने हो भने जुन चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेर आएको छ, त्यो एक कार्यकालभित्र पार्टी फोर्न दिनुहुँदैन भन्ने पनि एउटा बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न पाए राम्रो हुन्छ । किनभने पार्टीको एजेण्डा र चुनाव चिन्हमा जित्ने अनि आइसकेपछि पार्टी फुटाउनु पनि राम्रो होइन ।
सानो पार्टी चलाउन गाह्रो कि सजिलो हुँदोरहेछ ?
मैले आफैं पार्टी अध्यक्ष भएर चलाएँ । तर, यसो गर्दा राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न पनि गाह्रो हुने । किनभने जिल्ला र गाउँस्तरका कार्यकर्तालाई केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ र त्यहाँ राजनीतिक संस्कार र अनुशासन विकास गर्न सकिँदैन । यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने थ्रेसहोल्डले नेपालजस्तो देशमा ७/८ वटा वा १० वटासम्म पार्टीहरु स्थापित गराउँछ । यो भन्दा धेरै गर्दैन । यसो गर्दा देशलाई सेवा गर्छु भन्ने युवाहरु तल्लै तहबाट संस्कारित भएर आउँछन् ।
अब थ्रेस होल्ड लागू भएपछि साना पार्टीले के गर्नुपर्छ ? आफ्नै पार्टीलाई ठूलो बनाउनेतिर लाग्ने कि ठूला पार्टीहरुमा विलय हुने ?
अरु त उपाय नै छैन । अब शक्तिलाई विस्तार गर्नुपर्‍यो । या त पार्टीलाई त्यो रुपमा विकास गरेर ठूलो पार्टी बनाउनुपर्‍यो, हैन भने विचार मिल्ने पार्टीहरुसँग ध्रुवीकरण गर्नुपर्‍यो । मर्ज वा एकीकरण गर्नुपर्‍यो । म के जोड दिन चाहन्छु भने यो राम्रो हो ।
अब तपाईको पार्टी आफैं ठूलो हुनेतिर लाग्छ कि अरु पार्टीसँग एकता गर्नेतिर लाग्छ ?
हामी त थ्रेस होल्ड आउनुभन्दा अगाडि नै यो मुलुकलाई संघीय समावेशी बनाउने विचार बोक्नेहरुसँग छलफल र बहसमा छौं । र, हामी करिब करिब पार्टी एकीकरणको अन्त्यतिर पुगेको अवस्थामा यो थ्रेस होल्ड आएको हो ।
मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुवीच एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउन सम्भव छ कि छैन ?
यो समयको माग हो । यसमा हामी सकारात्मक सोचका साथ पहलकदमी लिन तयार छौं । यो हुनैपर्छ । यो समयको माग हो । कार्यकर्ताको माग हो, जनताको माग हो ।
‘व्यवसायीको काम भोट हाल्ने
‘सबैलाई समेटेर नेतृत्व गर्न
‘हामीले उठाउने शुल्क रोकिंदैन
आम्दानीको श्रोत बन्दै बाँसका सामाग्री
डा. हर्क गुरुङ पर्वतीय पुरस्कार डा. लीलाई
सोलुखुम्बु पिके डाँडा
सगरमाथा क्षेत्रमा लेक लागेर पर्यटक भरियाको मृत्यु ।